IWatermark Pro Incwadana yeMac kunye neWin Page (JP)
Iinguqu ezindala zeWatermark Pro yeMac kunye neWin
I-iWatermark Pro ixabisa i- $ 30. Emva kokuyizama nceda uye kuthi ivenkile ukuthenga. Ukungenisa ii-watermark zangaphambili kwiWatermark ukuya kwiWatermark Pro yiya kwithebhu ephambili sebenzisa iqhosha lokungenisa ukulayisha ii-watermark zakudala kunye noseto.
Inani leentlobo zeWatermark 8 Nganye Iluncedo Kwinjongo Eyahlukileyo.
Sebenzisa i-1 okanye iiWatermark ezininzi ngaxeshanye Umda (usekwe kwimemori)
I-Watermark 1 okanye iBatch inani elingenamkhawulo weefoto Umda (usekwe kwimemori)
Isenzo segalelo Isihluzo sokufaka iifoto ngobungakanani, isisombululo, igama, ifomathi, njl.
Iintshukumo zeziphumo i-watermark, yenza ubungakanani kwakhona, uthiye ngokutsha, yenza ii-thumbnails, yongeza okanye ususe imetadata.
imveliso Iindidi ezili-10 ezahlukeneyo zoseto lwemveliso
Hlela ii-Watermark Yenza iiwatermark zesiko, phinda, cima, bonisa kwaye uhlele useto nangaliphi na ixesha.
Isixhobo sokuhambisa amanzi Indawo yokugcina zonke ii-watermark zakho, ukulungelelanisa, ukuhlela, ukutshixa, ukujonga kwangaphambili, ukwabelana kunye nokusetyenziswa ngokucofa.
Metadata I-XMP, i-EXIF, i-IPTC kunye ne-Google Search metadata
Iimpawu zeMetadata njengemanzi Yongeza i-IPTC, iTiff, Iimpawu zeFayile, iExif, iGPS, iithegi kwiiwatermark zombhalo ukubona ulwazi kwiifoto
I ziphumo I-Emboss, ikrola, inverse, inkcazo, ithunzi elimnyama, ithunzi elimhlophe, njl.
Isikali seWatermark Eyiyo (isalamane), ithe tyaba kwaye ithe nkqo (ipesenti epheleleyo)
Ifomathi yeWitermark yokuBhala ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, ukungafihli, isithunzi, umda, njl.
Kulula ukuyisebenzisa Ngokunyanisekileyo, kulula ukuyisebenzisa
Iphinda iifayile zoqobo kunye neewatermark ezo. Ungaze uchukumise iifayile zakho zoqobo. Kwaye igcina iifayile zakho zoqobo ngokungagqibekanga. Okanye ungayicima loo nto kwi-Advanced:Prefs
Iinkqubo zeWatermark zenza imifanekiso RAW uninzi lwazo olungazenzi.
OKUBALULEKILEYO - ngeWatermark ungasebenzisa iifoto zezisombululo ezahlukeneyo kunye nokuziqhelanisa nebatch kwaye ugcine i-watermark kwifoto nganye ijongeka ngokufanayo ngenxa UkuCanda isixhobo. Isikali sithetha ukuba i-watermark inokuthatha ipesenteji yobubanzi ngaphandle kokungqinwa okanye ukujongwa komfanekiso ngamnye.
IWatermark inokwenza i-watermark efakela idatha ye-IPTC / XMP ngalo lonke ixesha isetyenziswa kunye okanye ngaphandle kwewatch ebonakalayo. Ilungele imibutho yeendaba.
Windows: Khuphela kwaye ufake usebenzisa isifaki.
1. Ekunene, cofa kwi icon yeWatermark Pro kwaye ukhethe ukuhambelana kwaye ukhethe utshintsho kwiqhosha eliphezulu le-DPI emva koko ukhethe u- "Override High DPI Scaling" kwaye usete kwiNkqubo (Uphuculo). Kubonwa kwiscreen esingezantsi.
Guqula i 'bonisa izicwangciso' (ngokuzithandela) kubonwe kwi umfanekiso wekrini ongezantsi, kwintetho yakho kwaye kuxhomekeke kwamehlo akho. Ukuba ufumanisa ukuba iifestile zeWatermark zincinci kakhulu, uhlengahlengiso lweSetting ukuya kwi-150% okanye i-200% kwaye uhlengahlengise useto lwe-iWatermark's 'Ukuhambelana' (kwinyathelo loku-1 ngasentla) ukukala iifestile. Emva koko ucwangcisiwe. Ezi setingi zeWatermark zikhunjulwa ngophuculo.
1) ThayiphaCwangcisa imenyu yokuhla iye kolunye lweentlobo ze-watermark.
2) IgamaCwangcisa igama olifunayo kwi-watermark
4) Faka - Faka umxholo wabalinganiswa abakhethekileyo njenge © uphawu lwelungelo lokushicilela okanye ™ yophawu lwentengiso, njl.njl. Ulwazi ngakumbi kulapha.
I-5) IfontiCwangcisa i-Font kwaye ulungele ubungakanani bamagama.
6) Isiphumo-Ucwangcisa isiphumo njengokukrola, ukumba emboss, ukujikajika, njlnjl. Ekunene kweZiphumo, setha umbala wefonti, isithunzi sombhalo, kunye nolwalathiso lokukhanya okudala eso sithunzi.
7) Umbala ongemvaCwangcisa umbala ongasemva kunye neenkcukacha zeBorder
8) UkulungelelanisaCwangcisa ulungelelwaniso (ngasekhohlo, embindini, ngasekunene) kokubhaliweyo kunye nokutshixa okubeka ngaphezulu padding / indawo ejikeleze isicatshulwa.
9) Ukujikeleza- Guqula ukujikeleza isicatshulwa.
I-10) I-OpacityCwangcisa ukungafihli / ukungafihli nto.
11) Ukulinganisa- Oku kuseta iWatermark ngokwahlukileyo kuba inika ukhetho lokulinganisa kunye nokulinganisa ngokupheleleyo.
Isalamane (%) -iseto emiselweyo, elula ukuyiqonda nokuyisebenzisa. Ngaba yenza kanye le nto ifunwa ngabantu abaninzi. Kwimeko yokuma kwesihlobo isethwe ngu-% ukusuka kwimiphetho. Nokuba ungakanani ubungakanani befoto uza kufumana iziphumo ezifanayo. Ubungakanani beWatermark / isikhundla sichaphazeleka bubungakanani befoto. Kwiphepha lezithombe olu seto lukuvumela ukuba usete indawo ehambelana ne-watermark (ngeepesenti) ngaphandle kobungakanani kunye nokuqhelaniswa nefoto nganye kwibhetshi. Umzekelo: kwibhetshi yeefoto ezi-2, enye isezantsi kwaye enye isisombululo esiphakamileyo, i-watermark yomda isetwe ukuba ibe ziiphikseli ezili-10 ububanzi kwifoto enye yesisombululo esincinci xa inokulinganiswa ibe ziiphikseli ezingama-20 ububanzi kwisithombe esiphakamileyo. Kwixesha elidlulileyo besinemodi "yesihlobo" kuphela, kodwa abanye abasebenzisi bacele into "eyiNtloko".
Absolute (pixels) -seta yonke into, isikhundla, iifonti, imida, imizobo kunye nayo yonke into itshintshiwe ukuze isebenze kwiiphikseli. Imowudi yeemetri "eziqinisekileyo" yenza ubungakanani / izikhundla zayo yonke into ezimeleyo kubungakanani befoto. Ubungakanani beWatermark kunye nokuma kuya kuhlala kunjalo (kwiiphikseli) kuzo zonke iifoto. Umzekelo: kwibhetshi yeefoto ezi-2, enye isezantsi kwaye enye isisombululo esiphakamileyo, i-watermark yomda ebekwe kwiiphikseli ezili-10 ububanzi iya kuthi kuzo zombini iifoto ibe ziiphikseli ezili-10 ububanzi.
Kwisithombe-skrini unokubona ukuba imenyu yokwehliswa isetelwe 'Akukho kukala' ngokungagqibekanga. Oko kuthetha ukuba awusebenzi kwi% kodwa usebenzisa iipikseli.
Zonke iinketho zoKwakha zibonakala kwimenyu ehlayo apha ngasentla 'Akukho Sikali', 'Umgangatho othe tyaba Ku:' kunye 'noMgangatho oMileyo ukuya ku:'
Akukho kukala - kuseta isikali sokusebenza kwiiphikseli.
Isikali esithe tyaba: - icwangcisa isikali ukuze sisebenze ngokuthe tye kwi%.
Isikali esime nkqo ku: - icwangcisa isikali ukuba sisebenze ngokuthe nkqo kwi%.
12) Ithayile yokugubungela umfanekiso - iphinda-phinde itekisi ixesha elininzi kwifoto. Oku kubalulekile kwabo bantu bafuna ukuqinisekisa ukuba akukho nxalenye yeefoto ithathiweyo.
13) Phina - Ikuvumela ukuba usete indawo yewatchark ngendlela yokuba ifane kuzo zonke iifoto, ingasonjululwa isisombululo sayo (imbonakalo okanye imbonakalo yomhlaba). I-Pin ivumela ukubeka indawo ngendlela eqhelekileyo ukuya phezulu, ekhohlo okanye ezantsi, ekunene, njl.
14) Indawo-Ukuba usete indawo ngokubanzi ngePin ungayilungisa loo nto. Apha ngezantsi ubona 'i-Offset X' kunye ne 'Offset Y'. Kuxhomekeke ekubeni yeyiphi i-Pin oyikhethileyo ungatshintsha u-X no-Y, u-X okanye u-Y. U-X sisalathiso esithe tyaba kwaye u-Y sisalathiso esime nkqo.
Ukuba ujonge ifoto enye kukho iindlela ezilula zokubeka indawo kodwa isizathu esifana noku sivumela ii-watermark ukuba zivele kwindawo enye nokuba ujonga enye okanye iwaka iifoto zobukhulu obahlukeneyo kunye nolwazelelo.
Iimpawu ziluncedo kakhulu. Sebenzisa 'Faka iiTag' kuzo zonke iisetingi zokubekwa kwewatch (kubonwe ngasentla) ukubeka iMetadata (njengemodeli yekhamera, umhla wokudala, amanani alandelelanayo, igama lefayile, indawo, njl. Njl.) Kuloo foto okanye ividiyo kwiwatch ebonakalayo kuloo ifoto okanye ividiyo. Sebenzisa ezi ukwenza i-watermark yakho eyenziwe ngokwezifiso ukubonisa uluhlu lolwazi kwiifoto zakho oluya kwahluka ngokuxhomekeka kwimethadatha kuloo foto.
Umzekelo 1: Masithi ufuna ukubeka inombolo eyahlukileyo, njengenombolo yesiriyeli kwifoto nganye kwibatch ye-119. umfanekiso weskrini ungabona indlela iithegi kunye neethegi ezongezwa ngayo kwi-watermark yombhalo kwaye ibekwe kwisithombe. Ngoku ifoto nganye kwi-batch iya kuba ne-Counter ekhethekileyo kunye ne-Total. Ingabonakala ngokusebenza ezantsi ngasekhohlo kwifoto engentla kwi-zoomed kwifoto engezantsi. Oku kubonisa ukuba iifoto zinenombolo nganye ngokuchanekileyo, kule nombolo, 021 ka-119. Iluncedo kakhulu!
Umzekelo 3: Masithi ungumvavanyi weekhamera zemagazini okanye iwebhusayithi kwaye ufuna ukuvavanya iifoto kwikhamera ethile. Ukwenza oku kuya kufuneka ubonise ii-specs ezahlukeneyo kumakhulu ezithombe ezithathiweyo ngeendlela ezahlukeneyo. Umsebenzi owoyikisayo wombutho. Iimpawu zeWatermark zenza lo msebenzi ube lula kakhulu kuba ngoku ungabeka ii-specs zeseto sekhamera, nangawuphi na umzuzu isithombe sithathiwe, kwifoto nganye.
I-Autosize Radius-ibeka ngokuzenzekelayo irediyasi efunekayo ukulungelelanisa isicatshulwa ukuze kuphele ukudibana. Oku kugqitha iRadius engezantsi.
Radius - isicatshulwa esingaphandle kweArc
Isicatshulwa A okanye ∀ -nikeza isicatshulwa kwicala lasekunene phezulu okanye kwicala elisezantsi.
I-Angle - ijikelezisa isicatshulwa esijikeleze iarc.
I-Angle - tshintsha i-angle yombhalo kwi-arc Okanye ujikeleze i-engile ngesangqa kunye nophawu lwamachaphaza.
3. I-watermark yakho entsha yongezwa kwimenyu ehlayo (ibonwe ngasentla). Khetha okanye nayiphi na enye into yokubona ifoto. Sebenzisa iqhosha lokucima i-watermark ebonisiweyo
Utyikityo-ukongeza utyikityo lwakho njengew watermark usebenzisa iBitmap Watermark.
OKUBALULEKILEYOAbalinganiswa abangama-25 okanye ngaphantsi (kucetyiswa) kwi-StegoMark bayivumela ukuba yomelele kakhulu xa kugcinwa / kugcinwa kwakhona i-watermark .JPG ifoto. Ukufikelela kuma-80 kunokusetyenziswa kodwa kuya kuchaphazela ukomelela komyalezo. Khumbula ungasebenzisa isifinyezo se-URL ukwenza i-URL encinci yokushumeka.
OKUBALULEKILEYOI-StegoMark isetyenziswa gca kwiifoto ezi: Imifanekiso ephezulu yesisombululo. Iifoto ezineepateni ezahlukileyo, imibala, ukwenziwa kungabamba ulwazi olungaphezulu kwi-Stegomark.
Umzekelo 2: Umfanekiso ophakamileyo wehlathi, imithi, ingca, okanye isibhakabhaka une-entropy engaphezulu (ngokwamanani onke ayenzayo) kwaye ke igumbi elinolwazi lweStegoMark.
Ukuqala uvule iphepha 'lomphathi weWatermark' kwaye ukhethe uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka '+' kwaye uza kuyibona le menyu yokwehla:
Khetha umba wokugqibela StegoMark…
Indlela yokuqala neyona ilula yokufunda iStegoMark kukuya kwimenyu yefayile, ukhethe into ebizwa ngokuba 'yiStegoMark Viewer'. Tsala ifoto yakho, okanye usebenzise iqhosha lokukhetha. Ukuba akukho password izakuveza kwangoko umxholo. Ukuba kukho igama eligqithisiweyo, chwetheza igama eligqithisiweyo kwaye ubethe 'Faka isicelo'. Apha isicatshulwa esityhiliweyo sithi 'Ifoto nguMark Fleming'.
processing-Ukujonga indawo yezicwangciso ze-watermarking, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukunika igama kwakhona njl.njl apha ungaseta ngokukhawuleza ukuba yeyiphi i-watermark eza kusetyenziswa kwimenyu ehlayo. Kananjalo ungavula / ucime ubungakanani kwakhona bezithonjana, izithonjana, i-EXIF / IPTC / XMP, kwaye unokuseta ifomathi yokuvelisa kunye nomgangatho (ukuba jpeg).
Umphathi weWatermark-Window esekunene. Kulapho ukhetha enye okanye ngaphezulu ii-watermark eziza kusetyenziselwa ukubukela iifoto okanye iifoto.
dala-Yila i-watermark entsha. Cofa u + kwaye ubone ezi ntlobo ze-watermark ungazenza (skrini ingezantsi).
Susa- khetha enye okanye ezininzi ii-watermark ukuzicima.
Hlela -Khetha i-watermark kwaye ucofe eli qhosha okanye ucofe kabini ukuhlela kumhleli wew watermark.
Imboniso - unika imbonakalo usebenzisa ifoto kunye ne-watermark ekhethiweyo.
Hlanganisa-Udibanisa ii-watermark ezi-2 nangaphezulu.
Ukuthumela ngaphandle-Sebenzisa oku okanye kube lula ngokutsala i-watermark kwidesktop ukuze wabelane okanye ugcine ngayo. Ii-watermark ezithunyelwa kwelinye ilizwe zinalo olu phawu:
Ngenisa-Sebenzisa lo myalelo okanye utsale ii-watermark ezithunyelwa ngaphandle, kunye ne-icon engentla, ukuba nazo kwi-Watermark Manager.
tshixa Cofa kwindawo encinci ukutshixa / ukuvula i-watermark. Ukutshixa kwenza ukuba kufundwe-kuphela kwaye kungabi kuhleleka okanye kucinywe.
Vula - Cofa kwisitshixo esincinci ukutshixa / ukuvula i-watermark. Ukutshixa kuyenza ifundwe kuphela kwaye ayihlelwanga okanye icinywe.
Ngenisa okanye Susa i-IPTC / XMP kwi-watermark-Shumeka okanye ususe ulwazi olukule ndawo ye-IPTC / XMP kwindawo yew watermark. Ke xa le watermark isetyenziselwa ukongeza kuyo nayiphi na eminye imisebenzi ikwashumeka imethadatha.
Umhla / IFomathi yeXesha-Ukutshintsha umhla / iifomathi zexesha eziboniswe kuMphathi weWatermark.
Iimbonakalo zekholamu-Ibonisa kwaye ifihle izinto ezahlukeneyo zekholamu kuMphathi weWatermark.
reverse-Ukhupha nokuba yeyiphi imvelaphi yomfanekiso wesampulu umbala ukusuka kumbala wesampulu yomfanekiso, okanye umva, ukuxhomekeka ekubeni yeyiphi isampulu enexabiso lokuqaqamba okukhulu. Imvelaphi yesampulu yamaxabiso emodeli emnyama avelisi tshintsho; emhlophe iguqula amaxabiso ombala ongasemva.
Inverse iluncedo olunokusetyenziswa kuba igcina nokuba isicatshulwa esihle sicace gca kwimifanekiso enemvelaphi yethoni eguquguqukayo. Okumhlophe ngakumbi okusetyenzisiweyo kuguqulwa ngcono. Kuyinyani kwisicatshulwa kunye nemizobo. Umnyama akayi kwenza nto. Kungcono ukusebenzisa umhlophe nokuba kukwisicatshulwa okanye kwimizobo yendlela engafaniyo.
Umnyama omnyama-kanye le ucinga ngayo.
Ulwandlalo - ucacisa isicatshulwa.
ICEBISO: Beka ixesha kunye nomhla woFomati kulo IMacyiya kuLwimi nakwiiNgingqi kwiiNkqubo ezikhethwayo emva koko ucofe iqhosha eliPhambili. KwiWindows cofa kwi-Start menu, emva koko ucofe iPaneli yokuLawula emva koko ucofe uMhla okanye ixesha.
Gcina imethadatha esele ikhona - Yavulwa ngokungagqibekanga. Oku kuphinda phinda yonke ingcaciso yemeta kwifayile yoqobo kwifayile ekhutshelweyo.
Yongeza i-IPTC / XMP metadata enikwe amandla- Xa oku kukhe kwenziwa zonke iimeta ezijongiweyo (Umsebenzisi okwenziwa ngokwezifiso) kwincoko yababini engezantsi ongezelwe kwikopi yefayile yasekuqaleni.
Inkqubela yokuvula ngokuzenzekelayo-Emva kokuba kuqalisiwe ukwenziwa komsebenzi emva koko kuqaliswe incoko yababini ngokuzenzekelayo.
Inkqubela phambili yokuvala ngokuzenzekelayo-Mva kokuqhubekeka ukuba oku kuhlolwe inkqubela yencoko yababini ivala ngokuzenzekelayo.
Yandisa i Window eSebenzayo-Xa kwindawo yokulungisa kwi-tab ephambili ihlala ivulekile.
Useto kunye neeWarkmark -Cofa eli qhosha ukungenisa ukhetho kwi-iWatermark yakudala (hayi ipro).
Iifayile zeThala lencwadi - le yindawo yeefayile ozenzayo.
Veza ifayile yokhetho -Uvula umntu ozifumanayo kwi indawo Ifayile oyikhethileyo kwaye iyiphakamisa.
Jonga Iifayile eziLugcinayo-Senza iikopi zezinto zakho zokuqala ukuqinisekisa ukuba kukho ikopi yesibini. Eli qhosha liya kuvula loo folda kwi-Finder.
Hlaziya konke okungagqibekanga - ukusetha kwakhona isicelo sokuseto olungagqibekanga lwendalo. Oku kuluncedo kakhulu ukuyisebenzisa ukuba unengxaki.
Umbala woMhleli woMhleli- lo ngumbala ongasemva womhleli. Ingasetwa kwakhona kwi-drop-down kumhleli kwikona ephezulu ngasekunene.
Yandisa imisebenzi yokuqhubekeka kwiThebhu ephambili -Ukujonga oku kuyakwenza njalo xa uvula iWatermark iya kuvula kwi-Tab ephambili kunye necandelo eliphakathi (imisebenzi yokulungisa) eyandisiweyo.
Sebenzisa inkqubela phambili yeJPEG - sukukhangela ukusetyenziswa kwesiseko seJPEG. Sukutshintsha oku ngaphandle kokuba uyayazi into oyenzayo.
Kwimifanekiso ngaphandle kokuNgena kwiProfayili -Ikuvumela ukuba ukhethe iiprofayili ezahlukeneyo eziza kwi-Mac okanye iiWindows okanye zilayishwe kwiNikon, Canon okanye kwenye isoftware. Okungakumbi malunga neeprofayili zombala we-ICC zezi Apha.
Yenza iFayile yezeMbali-Iyimfuneko kuphela ukuba sikucela ukuba uyilayite ngenkxaso yetekhnoloji okanye ufuna ilog yayo yonke imisebenzi.
Veza iMbali yeFayile -Oko kubonisa ukuba ifayile yelog.
Ngenisa iiWatermark ezindala -Ukungenisa ii-watermark zakudala ze-iWatermark. Ngalo lonke ixesha iqhosha libethiwe liya kungenisa zonke ii-watermark ezindala ukuze kungcono xa ulibetha kube kanye ngaphandle kokuba ufuna ukuphinda kabini zonke ii-watermark zakudala.
Ukungena- ifuneka kuphela xa iceliwe yinkxaso yethu yetekhnoloji. Olu lwazi lunceda abaprogram bethu.
I-Dropbox Icon - Cofa apha ukuya kwindawo yeDropbox kwaye wenze indawo yokugcina yasimahla ye-2 GB.
Ukulayishwa kweDropbox-Ukuba uneakhawunti yeDropbox cofa eli qhosha ukuze ulilayishe. Kulungile ukhuphelo lwee-watermark zakho ezikwi-intanethi. Ikwavumela ukuba uvumelanise ii-watermark kunye noseto kunye nezinye iikhompyuter.
Ukhuphelo lweDropbox -Khuphela ii-watermark kunye noseto kwiDropbox kwiikhompyuter yakho.
Cofa ibhokisi yempazamo-Isusa ii-watermark kunye noseto kwiDropbox.
IfotoNotary-Yinkonzo esiyenzileyo yokuxhasa ii-watermark. Yayiyinkonzo yelifu. Ayisafumaneki. Ukuyitshintsha sivumela abasebenzisi ukuba bathumele ii-watermark kunye nokusebenzisa iinkonzo zabo zefu.
I-Watermark entsha-Yila i-watermark entsha kumhleli. Ngaba iyafana nokubetha iqhosha +.
Hlela i-Watermark-Ngaba yinto efanayo nokubetha iqhosha lokuHlela kwiPaneli ephambili.
Gcina i-Watermark -Ngaba yinto efanayo nokubetha iqhosha lokuGcina kuMhleli weWatermark.
Bhrawuza Media-Kukhuphela ngokuzithandela kunye nesimahla iMedia Browser (iMac kuphela) ekuvumela ukuba ubambe ngokulula iifoto kwiindawo ezahlukeneyo. Nje ukuba ikhutshelwe kwaye isebenze kwangoko ukuvumela ukhetho lweefoto.
Yongeza incwadi eneenkcukacha - ibonisa indawo ekufumaneni ifolda yogcino lweefayile zoqobo zokufaka.
Amanzi athumela ngaphandle kwelinye ilizwe -Thumela ngaphandle ifayile yewatch yangoku kunye ne icon engezantsi.
Ngenisa iWatermark -Ukungenisa ngaphakathi ezo fayile ze-watermark zithunyelwa ngaphandle.
Seta iifolda-Okwenza useto olufanayo lokufaka / ukuphuma / iithonjana onokuzenza kwiPaneli ephambili.
Nciphise-Khangela kwimenyu kunye nezixhobo zeApple. Ayikhangeli incwadi.
Zoom -Ivula incwadana ekwi-Intanethi okhoyo ngoku 🙂
Veza Inkqubela yeMveliso -Ukuba uneengcebiso / iibugs unokuzixela apha. Sijonge Ulwazi ngeFoto -Ivula incoko yencoko yababini
Zisa konke ngaphambili -Zonke iiwindows zeWatermark Pro zisiwe ngaphambili.
Windows -Ibonisa iifestile ezivuliweyo zeWatermark Pro.
ukufuna-Khangela kwimenyu kunye nezixhobo zeApple. Ayikhangeli incwadi.
Uncedo lweWatermark Pro -Ivula incwadana ekwi-Intanethi okhoyo ngoku 🙂
Ukuzisa impendulo-Ukuba uneengcebiso / iibugs unokuzixela apha. Sijonge ezi kodwa asinakuphendula.
LOKUQALA: Yiya kwithebhu ephambili kwaye ubethe 'Cwangcisa konke okungagqibekanga'. Oku kuhlala kuthathela ingqalelo ingxaki ethi abantu bayalibala ukuba benze iinguqu kwisethingi ezahlukeneyo. Emva koko zama kwakhona.
3. Sithumele i-log log emva kokubangela ingxaki kwi-iWatermark. Ukwenza oku kuvula i-log log yeqhosha hit kwiqhosha kwithebhu ephambili ethi 'open log log log'. Cima ilog yekhonsoli uphinde usebenze iWatermark kwakhona ukwenza ingxaki emva koko ukope ulwazi olusiphumo kwilog yekhonkco kwaye usithumele nge-imeyile.
A: Khetha nje kwaye ucofe kwiqhosha lokuhlela. Iya kudala entsha enesihloko esifanayo kunye nokongezwa kwekopi yegama ekugqibeleni. Yazi inyani yokuba ezinye zinokuba nombhalo omhlophe onokuthi mhlophe kwimvelaphi isenokungabonakali. Tsala nje isicatshulwa ukuyikhetha kwaye uyitshintshele kuyo nayiphi na into oyifunayo. Rhoqo kwii-watermark zethu zedemo, sisebenzisa ithegi etsala olona qhakamshelwano (kuhlala wena) kwincwadi yedilesi.
QNdiyenza njani i-watermark etyikityayo kunye nesiginitsha yam yokwenyani?
AKwi-Mac ungayilandela le miyalelo uze ukope loo signature.png kwiWatchermarket entsha ukuze usebenzise naliphi na ixesha olifunayo.
4. Ukuba ufumana incoko yababini ethi 'awubhaliswanga' ke qiniseka ukukopa kwaye uncamathisele idatha yakho yobhaliso kwi-imeyile yobhaliso esiyithumele.
QNgaba ikhona indlela yokuvelisa iifoto ezinobungakanani obupheleleyo ngew watermark kunye nokukhutshwa kwezithonjana kodwa ngaphandle kwewwatermark?
Q: Ngaba i-Digimarc ayisiyiyo indlela enzulu yokuba abafoti bezokwenene benze ii-watermark kwiifoto?
A: Amawakawaka abafoti abaziingcali basebenzisa iWatermark. Isizathu sokuba siphuhlise iWatermark kukuba sinesidingo sokubukela iifoto zethu (uninzi lwethu singabafoti) kwaye sifuna into esebenza ngokulula, ngexabiso eliphantsi nangempumelelo. Siphande ngeDigimarc kunye nezinye iindlela ezininzi zokufaka i-watermark emfanekisweni. Sifumene iDigimarc ixabisa amakhulu eedola ngonyaka (kwaye bahlawulisa ngokusekwe kwinani lemifanekiso) kwaye ubuchule beDigimarc abunangqondo okanye buyasebenza. Ukuba ulungisa idatha yakho ngendlela engabonakaliyo njengeDigimarc ke abantu abayiboni. Kukho isoftware eyenza i-watermarking ebonakalayo, njenge-iWatermark, kunye nesoftware efihla ukujonga okufihlakeleyo, njengeDigimarc. Yithi unayo i-iPhone kwaye uyilahle epakini, kunokwenzeka ukuba uyibuyise kwakhona ukuba ibhalwe igama nefowuni yakho (iWatermark) emva koko ukuba ulwazi oluthile lufihliwe / lufihliwe kwi-flash drive yalo (Digimarc).
Okokugqibela, nokuba iWatermark iba ngumgca wokuqala wokuzikhusela (kulawulo lwamalungelo edijithali) akukho sizathu sokuba ungazisebenzisi ezinye iindlela ezinje ngeDigimarc.
3. qiniseka ukuba ukhuphele isakhelo sefonti kunye neplagi, ufake iifonti kuloo nto kuba zininzi iifonti ezisetyenzisiweyo kwi-iOS nakwi-Android.
Q: Xa ndijikeleza isicatshulwa sam se-watermark ngama-90 okanye ngama-270 degrees, siba sincinci kakhulu. Kufana nobubanzi / ubude beepesenti abulandeli i-engile yokujikeleza.
A: Ewe iyenza. Kuzo zonke eziapp kunye nezinye, iMedia browser ivumela ukufikelela ngokukhawuleza kokutsala kunye nokulahla kwisikhangeli sefoto, iPhoto okanye ilayibrari yokuvula kwiWatermark Pro. Khuphela nje isikhangeli seMedia kwaye ufake Emva koko sebenzisa imenyu yefayile yeWatermark Pro ukufikelela kwisikhangeli seMedia.
QNgaba ikhona iWatermark Pro yeWindows?
-Bonisa iThala leeNcwadi libonisa le folda:
Ukuthinta iqhosha elithi 'Bonisa ugcino' kukuthatha apha:
Le folda iqulethe iifayile zoGcino-
Iifayile zeLog -Bonisa iqhosha lokungena kwiConsole vula le folda.
Yiya kwimenyu yokuQala> Iphaneli yokuLawula> Ulawulo lweMibala.
Q: Ukuba umfanekiso we-CMYK ukwinkqubo yebhetshi, ngaba uya kuyitshintsha imo yombala ibe yi-RGB?
Q: Zeziphi iifomathi zeRAW ezifundwayo yiWatermark Pro?
AI-Apple iyaqhubeka nokukhupha uhlaziyo kwi-Mac OS ukuze ixhase ngcono iifomathi ezahlukeneyo zeRAW, Xa iMac OS ihlaziywa iWatermark ithatha uncedo ngokukhawuleza kolu hlaziyo. Ulwazi oluthe kratya kule Apple Tech Qaphela: http://support.apple.com/kb/HT4757
Q: Ndingayisebenzisa eminye yemethadatha kwiwatch yefayile?
AEwe sicebisa ukuba izame kuba inokuba luncedo kakhulu. Yiya kwi 'Yongeza isicatshulwa se-watermark' kwimenyu yokhetho khetha 'iMetadata' khetha kwenye ye-EXIF, i-IPTC okanye ezinye iindlela kwaye iya kulahla kwisicatshulwa esiguqukayo esizakufaka idatha elungileyo xa kusenziwa.
ASisebenzisa i-API yeApple (ikhowudi yabo) ekusebenzeni neTIFF, JPEG, njl.Buphi ubukhulu obunokubakho buxhomekeke kuhlobo lwefayile. Ubungakanani obukhulu buya kuxhomekeka kubungakanani be-RAM kumatshini.
Kwi-TIFF kuya kuxhomekeka ekubeni ifayile ye-TIFF iqhelekile okanye icinezelwe. Umda we-TIFF ubungakanani be-4GB xa ugcinwa kwidiski. Iinketho zoxinzelelo zinokunceda. Ukuba ubungakanani befayile> i-4 GB kunye ne-TIF iya kusilela. I-JPEG / JFIF ixhasa ubungakanani bomfanekiso we-pixels ezingama-65,535 × 65,535, yiyo loo nto ukuya kuthi ga kwiigigapixel ezi-4 kumlinganiso we-1: 1. Uhlelo lokusebenza luka-Apple lokujonga kuqala lunomda wokuthumela ngaphandle iiJPEG's ze-30,000 × 30,000.
1. Musa ukubonisa incoko yencoko.
Kwinguqulelo yakudala yeWatermark Pro <1.72
/ Ithala leencwadi / ukuKhangela ngokuKhawulezayo (okt kubo bonke abasebenzisi-oku kufuna iAkhawunti yoLawulo).
Ukukhuphela isifakeli seeplagi kwimenyu yeWatermark Pro khetha, 'Khuphela iSifakelo ukuze ufake iPhoto kunye neePlagi zokuvula kunye neefonti'. Okanye unokukhuphela isifaki apha:
2. Kwi-Finder khetha u-Yiya kwimenyu-> Yiya kuhlobo lweFolda kwi:
3. Cima "iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter" kwifolda yePhoto plugin.
2. Kwi-Finder khetha u-Yiya kwimenyu-> Yiya kuFolda yohlobo ku: ~ / Ithala leencwadi / iNkxaso yeNkqubo / Ukuvula / iPlagi-Ins / uMhleli
4. Kwi-Finder khetha u-Yiya kwimenyu-> Yiya kuFolda uhlobo apha: ~ / Ithala leencwadi / Inkxaso yesicelo / Ukuvula / iPlagi-Ins / ukuthumela ngaphandle
Kwibhokisi-Fumana iakhawunti yasimahla ene-2 ​​GB yendawo ngokunqakraza Apha.
Google Drayivu -Fumana iakhawunti Apha I-5 GB yasimahla. Amagqabantshintshi nge-Google Drayivu Apha.
OneDrive -Fumana iakhawunti Apha kunye ne-7 GB yasimahla.
Ukujonga ngedijithali -Inkqubo yokungenisa ulwazi kwi-fayile yemidiya enokusetyenziselwa ukungqinisisa ubunyani bayo okanye ukwazisa abanini bayo.
I-watermark engabonakaliyo yedijithali-Ulwazi olungeniswe ngaphakathi kwedatha yomfanekiso kodwa luyilelwe ukuba lungabinakho ukubonwa ngabantu ngenxa yoko lwazi olufihliweyo. I-Steganography isebenzisa ubuchule obufanayo kodwa ngeenjongo ezahlukeneyo.
eXIF-I-Exif-Ifomathi yefayile yomfanekiso eguqulwayo (i-Exif) Uhlobo lweemethadatha eziphantse zonke iikhamera zedijithali ezigcina ngaphakathi kweefoto. I-EXIF igcina ulwazi olusisigxina njengomhla kunye nexesha elithathiweyo, useto lwekhamera, i-thumbnail, iinkcazo, iGPS kunye nelungelo lokushicilela. Olu lwazi alwenzelwanga ukuba lutshintshwe kodwa lunokususwa ngokuzikhethela kwiifoto. Ukucaciswa kusetyenziswa iJPEG, iTIFF Rev 6.0, kunye neefomathi zefayile zeRIFF WAV, ngokongezwa kweethegi zemethadatha ezithile. Ayixhaswanga kwiJPEG 2000, PNG, okanye kwi-GIF.
XMP-Lwandiso lweMetadata eyandisiweyo (XMP) luhlobo oluthile lolwimi olwandisiweyo olusetyenziswa ukugcina metadatha kwiifoto zedijithali. I-XMP iye yaxhasa i-IPTC. I-XMP yaziswa ngu-Adobe ngo-2001. I-Adobe, i-IPTC, kunye ne-IDEAlungedibene nayo ukuyazisa ngo-2004 i-IPTC Core Schema yeXMP, egqithisela amaxabiso emethadatha ukusuka kwizentloko ze-IPTC iye kwi-XMP yanamhlanje.
Nceda uqonde ukuba asinakukunceda wenze iAppleScript.Sinokuqeshwa ngeyure ukuba unento ofuna ukuyenza kwaye awufuni kuyenza ngokwakho. Qhagamshelana nathi. Kodwa iAppleScript kulula ukuyifunda kwaye iyonwabisa. Qala ngento elula kwaye wakhe ukusuka apho.
A: Ewe. Cofa apha ngasentla kwiApple Applescript yokukhuphela emva koko ukhethe iAppleScript enkulu + ngoobhontsi. Iinkcukacha ezithe kratya kwinto ebhaliweyo kunye nendlela esebenza ngayo apha ngezantsi.
Yenza umfanekiso owenziwe ubungakanani kwakhona ngobukhulu bomfanekiso omkhulu 1024 x 768 ngemethadatha kunye ne-thumbnail i-256 x 256 (engenayo imethadatha) efakwe kuqala ngo "thumb_" Thatha ukuba usete ezinye iisetingi kwiWatermark Pro njengoko unqwenela (okt): - Ukuthiya kwakhona ifomathi yemveliso Igama kufuneka lisebenzise ithegi "isimaphambili". Sibeka isimaphambili ku "ubhontsi _" -iifayile ezikhethiweyo zokufaka, - i-watermark yokusebenzisa, -ifomathi yokuphuma- kunye nokhetho olungadweliswanga ngezantsi: Iskripthi sitshintsha umgangatho weJPG ukuya kuma-85 kwimifanekiso emikhulu. Iskripthi sitshintsha umgangatho weJPG ukuya kuma-65 kwimifanekiso emitsha Ukwenza amagama kwakhona isimaphambili ku “Thumb_” Iskripthi sinokuvula / ukucima ukubonwa kweewotshi ngokusekwe kwisithonjana esikhulu kwaye kwakhona… Vula Gcina iMethadatha kwaye ususe idatha yeGPS (indawo ye-GEO) yemifanekiso emikhulu. Cima Gcina iMethadatha kwaye ususe idatha ye-GPS isekhona kwimifanekiso emincinci. Cwangcisa i-DPI yemifanekiso emikhulu ukuya kwi-300 ebonisa i-dpi ye-thumbnail ukuya kwi-72 dpi
Khusela iifoto zakho
Iphaneli yeZicwangciso eziPhambili
1. Eyona nto iphambili
b. Umhleli weWatermark
3. Ukuhlaziya ubungakanani bayo
4. Ukuthiya ngokutsha